ဆင်းရဲသားများအားနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောပြဿနာများအကြောင်း Mr Basil Fernando အားမေးမြန်းချက် ~ Asian Human Rights Commission (Burma)
ဆင်းရဲသားများအားနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောပြဿနာများအကြောင်း Mr Basil Fernando အားမေးမြန်းချက်
ကိုပြောပြပါလလဲ။ ဘာ့ကြောင့် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းတာနဲ့ ဆင်းရဲတာနဲ့ကိုဆက်စပ်ပြီးပြောရတာလဲ။
Mr Basil….ကမ္ဘာမှာအထူးသဖြင့်တိုးတက်မှုနောက်ကျတဲ့နိုင်ငံတွေမှာနှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနဲ့ ဆင်းရဲမှုဟာဆက်စပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တွေ၊ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေအတွက်တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုတာက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆက်စပ်မှုတွေကိုခွဲထုတ်မှရမှာပါ။လူတွေအတူတူမလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အရင်တည်းကရှိနေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုခွဲထုတ်မှရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့လူတွေအချင်းချင်းပေါင်းပြီး
မဟုတ်ပါဘူး၊သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ ဒီapparatus တွေက အင်အားသုံးပြီးကြားဝင်လို့လူတွေပေါင်းစည်းမှုပျက်ရတာဖြစ်တယ်။တချိန်လုံးပဲအကြမ်းဖက်တယ်။
အကြမ်းဖက်တာကိုပဲကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးတာတွေ့ရတယ်။ ဒါဏ်ရာတွေရကြတယ်။ကွဲကွာကြရတယ်။ ခါးသီးမှုတွေခံစားကြရတယ်။ပျော်ရွှင်မှုမရှိကြဘူး။ဒီအရာတွေကသူတို့တွေအတူတူလက်တွဲဖို့၊တယောက်နဲ့
တာဆီးခံထားရတယ်။ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုဖန်တီးတာ
ဒီလိုပဲဆင်းရဲမွဲတေမှုအကြောင်းပြောချင်ရင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုအကြောင်းကိုအရင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒါဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင် လူတွေကြားထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာပြီးအဲဒီ့ဆွေးနွေးမှုဟာသူတို့တွေရဲ့စိတ်ကိုထွက်ပေါက်
ဆိုပြီး လူတွေကိုရိုက်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မတရားတဲ့ဈေးနှုန်း
ဒါဟာကူညီရာမရောက်ဘူး၊ဒါနလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါနကဆင်းရဲမှုပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ အဲ့ဒါထက်ပိုတယ်။လူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုဖို့၊အတွေးအခေါ်တွေဖလှယ်ဖို့နဲ အတူတူအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာကဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာလည်းပါဝင်နိုင်
Mr Basil…. စားစရာမရှိတဲ့လူတွေကထွက်ပြီးစားစရာရှာမှာဘဲ။အဲဒီ့လူတွေကိုအမြတ်ကြီးစားတဲ့
Mr Basil.... ပုံမှန်အလုပ်တွေကိုဖန်တီးရပါမယ်။တကယ်လို့လူတွေကအလုပ်ကောင်းကောင်းရပြီ
ဆိုရင် စားဖို့အတွက်ပိုက်ဆံရှိလာမယ်။ အလုပ်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရမယ်.သူတို့အ
မေး…..Mr Basil ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ၊ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိုအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်
Mr Basil…. ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွေထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့
ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ဆိုတာလူတွေရဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြောပြရမှာဖြစ်တယ်။ အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောင်ထဲထည့်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်
(Mr Basil Fernando ဟာအာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်)